'The Djinn' Trailer Na-anwa You Na-eme Ihe ishchọ - iHorror
Home Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ 'The Djinn' Trailer na-anwa gị ịme ihe
'The Djinn' Trailer na-anwa gị ịme ihe
edere ya Trey Hilburn III April 18, 2021
Enweela ụfọdụ fim dị oke egwu emere kemgbe ọtụtụ afọ gụnyere Djinn. Ma eleghị anya, otu n'ime ndị kasị mara ndị a bụ nnọọ mbuaha akpa nke Wishmaster ihe nkiri. Ugbu a, IFC Midnight bụ maka ịme ka ị mata ụdị Djinn dị aghụghọ karị. Nke a, nwere ihe pere mpe karịa otu ihe ma kama nke ahụ, emere ya kpamkpam site na ngwongwo ndị na-egbochi gị n'abalị.
Na nchịkọta akụkọ maka Ndị Djinn na-aga dị ka nke a:
Akụkọ a na - eso onye ogbi, Dylan Jacobs, dị afọ iri na abụọ, ka ọ na - achọpụta akwụkwọ dị omimi nke okwu anwansị n'ime ụlọ ọhụrụ ya. N'ịbụ onye ọnwụ nne ya na-enwe, na-enwe mmetụta nke ịnọpụ iche na onye ọ bụla belụsọ nna ya, Dylan na-eme emume nke na-ekwe nkwa iwepụta ọchịchọ obi ya: inwe olu. Mana ọ na - achọpụta n'oge na - adịghị anya na onyinye ọ bụla nwere nsogbu mgbe ajọ mmụọ ga-abịa ịnakọta mkpụrụ obi ya. Ugbu a tọrọ atọ n'ụlọ ọhụrụ ya n'enweghị ebe ọ bụla ọ ga-ezo, Dylan ga-achọrịrị ụzọ ọ ga-esi dịrị ndụ ruo etiti abalị ma ọ bụ kwụọ ụgwọ kachasị.
Ndị Djinn wepụtara na ihe nkiri ahọrọ na VOD bido na Mee 14.
Kedu ihe ị chere banyere ụgbọala na-adọkpụ maka Ndị Djinn? Mee ka anyi mara na ngalaba a.
Hallmark na-ewepụta ihe ịchọ mma Ghostbusters Mini-Puft Holiday ịchọ mma n'oge a. Gụkwuo ebe a.
IFC MidnightNdị Djinn